Nepal Deep | सुरक्षा निकायको उपस्थिति बिनै गुपचुप जलहरीको लागि सुन पगालिएको खुलासा !
सुरक्षा निकायको उपस्थिति बिनै गुपचुप जलहरीको लागि सुन पगालिएको खुलासा !
काठमाडौँ। पशुपतिनाथ मन्दिरमा जलहरी राख्नुअघि मुचुल्का तयार पार्दा सुरक्षा निकायलाई नै छलेको खुलेको छ। पशुपति क्षेत्र विकास कोषले सुरक्षाकर्मीको उपस्थिति बिनै सुन पगालेर जलहरी बनाउने काम गरेको खुलेको हो।
कान्तिपुर दैनिकमा छापिएको समाचार अनुसार जलहरी राख्दा करिब ११ केजी सुनको घोटाला भएको आशंकामा अख्तियार अनुसन्धान आयोगले छानबिन गरिरहेको छ। त्यसै क्रममा घोटालाका पहेलुहरु खुल्दै गएका हुन्। मुचुल्काको कागजमा पशुपति क्षेत्रको सुरक्षामा तैनाथ नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका अधिकृतको नाम उल्लेख गरिएको छ। तर मुचुल्का उठाउँदा उपस्थित हुन आफूहरूलाई खबर नै नगरिएको पशुपतिनाथको सुरक्षाका लागि तैनाथ नेपाल प्रहरीका निरीक्षक टीकाबहादुर कार्की र सशस्त्र प्रहरीका निरीक्षक वेदकुमार पनेरुले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई जानकारी गराएका छन्।
नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका अधिकृतले अख्तियारलाई बयानमा जलहरी बनाउने सुरुवाती चरणबाटै आफूहरू संलग्न नभएको बताएका छन् । ‘अरू बेला मन्दिरमा सामान चढाउनेलगायत निर्णयको मुचुल्कामा हामीलाई सहभागी गराइन्थ्यो, तर यस पटक खै किन हो, जानकारी नै दिइएन,’ एक सुरक्षा अधिकारीले अख्तियारलाई भनेका थिए। कोषले २०७७ फागुन ११ गते राति मन्दिरमा ९६ केजी ८ सय २२ ग्राम सुनको जलहरी राखेको मुचुल्काको व्यहोरामा उल्लेख छ।
त्यस्तै, मुचुल्का उठाउँदा लेखिएको कागजमा सुनको परिमाण अंकित अक्षर र अंकमा पनि थपघट गरेको समेत भेटिएको छ । अख्तियारले मुचुल्का गर्दा हस्ताक्षर गर्नेको विवरणसहितको कागजात कोषको कार्यालयबाट जफत गरेको थियो । यस्ता कागजातमा लेखिएका शब्द तलमाथि परे त्यसको दुवैतर्फ हस्ताक्षर गर्नुपर्छ । जलहरीको मुचुल्कामा त्यसो गरिएको छैन । मुचुल्काको व्यहोरा लेखिसेकपछि त्यही हरफमा अक्षरको आकार फरक पर्ने गरी ‘जलहरी बनाएर बाँकी रहेको सुनको टुक्रा जलहरीमा लगाइयो’ भनेर थप गरिएको छ। स्रोतका अनुसार सुरुको मुचुल्कामा सुनको टुक्रा जलहरीसँगै चढाइएको भनिए पनि अनुसन्धान गर्दा त्यस बेला सुन नराखिएको खुलेको छ। फागुन ११ गते राति जलहरीबाहेक कुनै पनि सुन नराखिएको बयान पुजारीले अख्तियारमा दिएको स्रोतले जनाएको छ।